Sida loo mideeyo arji si loogu isticmaalo laba koonto oo ku yaal MIUI | Androidsis
Qalabka Xiaomi iyo Redmi waxay si weyn uga faa'iideystaan ​​lakabka MIUI mahadsanid dhamaan xulashooyinka ay softiweerkani bixiyaan. Labada nooc ee 11 iyo MIUI 12 adeegsadaha wuxuu leeyahay shaqooyin badan oo looga faa'iideysan karo taleefankooda gacanta, isla sidaas ayuu ku dhacayaa kiniiniyadooda.
MIUI waxay kuu oggolaaneysaa inaad isku xirto codsi si aad ugu isticmaasho laba koonto, u adeegsiga qaab bilaash ah iyo ka faa'iideysiga, gaar ahaan haddii aad ka faa'iideysato mid gaar ah. Waxtarka faa iidada leh ayaa ah inaan cidlaheyn karno, sidaas darteed waxaan ka wada faa'iideysan doonnaa
Labada barnaamijba waxaa lagu uuraystay qalab kale sidoo kale, laakiin waa run in MIUI ay fududahay in la isticmaalo mahadsanid xaqiiqda ah in lagu sameeyo qiyaastii saddex tallaabo. Qiyaas in aad adeegsanaysid barnaamij kana sameysid koonto kale adigoon kujirin midka koowaad.
Si tan loo sameeyo, waxa ugu horreeya ayaa ah in qofka gaarka ahi uu awood u siinayo ikhtiyaarka labada codsi ee goobaha, haddii mid ka mid ah tallaabooyinka laga boodo, ma awoodi doonno inaan adeegsanno codsigaas. Si tan loo sameeyo, ka fikir barnaamijka aad rabto inaad isticmaasho ka hor intaadan jarin oo u isticmaal koontadaada Xiaomi / Redmi.
In la isku xidho arji si loogu isticmaalo laba koonto oo ku yaal MIUI waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Gali Nidaamyada Xiaomi ama Redmi taleefankaaga
Guji "Codsiyada" qalabkaaga oo sug inaad ku shubto dhammaan xulashooyinka
Hadda guji «Codsiyada labada ah»
Hadda raadso dalabka aad rabto inaad nuqul ka sameyso, ha noqdo WhatsApp, Telegram ama midka aad u maleyneyso inuu ku habboon yahay haddii aad rabto inaad sida ugu badan uga faa'iideysato.
Haddii aad u baahan tahay inaad gudbiso macluumaad, waxaa fiican inaad nuqul ka sameysan karto qoraal dheer oo si isku mid ah kuugu soo diro emaylkaaga, laakiin maahan waxa keliya, maadaama barnaamij kasta la dhegeysan karo. Waad isku dayi kartaa midkoodna haddii aad isticmaaleyso dhowr, maaddaama ay jiraan nooc ka mid ah illaa iyo inta aad ku haysato taleefannada casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo mideeyo arji si loogu isticmaalo laba koonto oo ku yaal MIUI